လမင်းခင်: January 2010
၆၁ နှစ်မြောက်ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ နှင့် တော်လှန်ရေးကျေးဇူး
၃၁-၁-၁၉၄၉ တွင် ဖ ဆ ပ လ အစိုးရမှာ အင်းစိန်ရှိ KNDOဗဟိုဌါနချုပ် ကိုဝန်းရံပြီးအင်းစိန်တွင်နေထိုင်
ရုံသာမကKNDO အားမတရားအသင်း အဖြစ် ကြေညာ
ခဲ့ရမှုကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဇန်န၀ါရီ (၃၁) အား
ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ယခု
အဲဒီအချိန်တိုင်းပြည်ဦးဆောင်နေသူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှု ဆုံးဖြတ်မှုနိုင်ငံရေးမကျွမ်းကျင်မှု စတဲ့အားနည်းချက်
တွေကြောင့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေဟာလက်နက်ဆွဲကိုင်ပြီးသူတို့ ကြမ္မာ သူတို့ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ ယနေ့ ထိ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံး တန်းတူအခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်တွေ
ဒီထဲမှာလက်နက်ဆွဲကိုင်တော်လှန်မှုကိုစခဲ့တဲ့ အကြီးမားဆုံးသော လူမျိုးစု ကြီးတရပ်ဟာ ကရင် တိုင်းရင်းသား
တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာရှိခဲ့ရင် ဒီပြဿနာတွေကို ဒီလောက် နှစ်တွေ မကုန်ဆုံး
လောက်ခင်ကတည်းက ဖြေရှင်းနိုင်ပြီပဲ လို့ ကျမ အနေနဲ့ ယုံကြည်နေပါတယ် ။
ဒါပေ မဲ့ ကျမတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ ကြမ္မာလို့ ပဲပြောရမလားအာဏာမက်သူတွေရဲ့ ရက်စက်တဲ့စနက်
ကြောင့် လို့ ပဲ ပြောရမလား ခုထိကို ဗမာတိုင်းရင်းသားအပါအ၀င်ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှလွတ်လပ်ခွင့် ကိုယ့်ကြမ္မာ
ဒါကို ဘာကြောင့်လဲ အဖြေရှာရင် မခက်ပါဘူး အာဏာ နေရာ ယစ်မူးတက်တဲ့ အရှက်မဲ့ လူ့ အန္တ တွေကြောင့်ပါ
ဗမာက လူမျိုးအရေအတွက် များလေတော့ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆွဲတွေကြောင့် လို့ ယိုးစွပ် ကြပေမဲ့စနစ်ဆိုးနဲ့
စိတ်ဆိုး စိတ်ရိုင်းတွေရှိတဲ့ အဟိတ်စိတ်လောက်နဲ့ သာ ပဠိသန္ဓေ ဖြစ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ လူ့ ငနွါးတွေကြောင့်ပါ ။
ကရင့်ခေါင်းဆောင်တွေမှာကျမ ကြားသိဘူးတဲ့ စောဘဦးကြီး ။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာဈာပနကိုပို့ ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မြ
စည်းဝေးပွဲ ဆွေးနွေးပွဲတွေ မှာ တွေ့ဆုံလေ့၇ှိပြီး ကျမတို့ အပေါ်ကိုပင်ပြန်လည် အသိအမှတ်ပြု ဆက်ဆံ တက်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာမလာဘော သူ့ တို့ တွေရ့စေတနာ သူတို့ တွေရဲ့ ကရင့်တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်မြန်မာ
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအပေါ်ထားတဲ့စေတနာ - အနီးကပ် တွေ့ ရှိ ကြားသိတဲ့အခါမှာ ကျမ ပိုလို့ ကိုလေးစား
တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ရှိရင် ဒီတော်လှန်ရေး မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကိုပစ်ပြီးဗိုလ်ခင်ညွန့် လက်ထက်ကတည်း
ကအလင်းဝင်တာကြာပြီပေါ့ ။။ ခုတော့ စစ်အုပ်စု ရဲ့ ခိုင်းစေမှုကြောင့် တိတ်တဆိတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရ ---
NGO တွေဆိုတာက လည်း ကို ယ်လာတဲ့နိုင်ငံဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိလျက် နဲ့လက်နက်ဆွဲ ကိုင်လို့ ဆိုပြီးလေထဲကတော်လှန်ရေးအုပ်စုလောက်သာထောက်ပံ့ ----လက်နက်ကိုင်တွေကို ရှောင်လွဲ ---အဲဒီ့ဒုက္ခ တွေကြားမှာမားမားရပ်နေတာ ကရင့် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေပါ ။။
ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေမှာအထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ နဲ့ အဆုံးအဖြတ်တင်းမာတာတွေရှိခဲ့သော်လည်း
တကယ်တန်း (၈၈) လူထု တော်လှန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့ တောထဲထွက်ပြေးလာသူ ကျောင်သား
အလုပ်သမား လူထုလူတန်းစားမှန်သမျှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီး ကျောင်းသားတပ်မတော်ကြီးကိုလည်းရအောင်ဖွဲ့ 
အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုတာလည်း ဖြစ်အောင် အသင့် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ် ။။ ဒီသမိုင်း တွေကို NGO ပေးငွေတွေ
နဲ့ဖုန်းကွယ်လို့ မရပါဘူး။ ဖျက်လို့ မရဘူး ကရင့်ခေါင်းဆောင်တွေ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေမှသိတာ မဟုတ်ဘူး
အာဏာရှင် နေရာမက် သူ ကိုရွံ့မုန်းတဲ့ ဗမာလူမျိုးစုတွေ ကလည်းသိနေတယ်။။
ဥပမာ --သက်သေတစ်ရပ် အနေနဲ့ ကိုမိုးသီဇွန် တို့ လို လူမျိုးရှိနေ တယ် ပေါ့ --
ဒီတော့ ကျမတို့ တစ်တွေတာဝန်မကြေနိုင်ခဲ့သေးတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးတန်းတူအခွင့်အရေး
ရဖို့ ဘယ်လိုမူနဲ့ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့သွားသင့် သလဲဆိုတာ စစ်အုပ်စု မျက်စိ စုံ မှိတ်ထားသလို အလိုတူအလိုပါ
အာဏာရူးတွေလည်း မသိဟန်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဟော --၈၈ ကာလ ကျော်က နေ ခုထိထားခဲ့တဲ့
သူတို့ စေတနာ သူတို့ ရဲ့ ကရင်လူမျိုးတွေ လွတ်လပ်စေ့ချင်တဲ့မျော်လင့်ချက် တွေကိုစော်ကားရာကျပါမယ် ။။
ကျမတို့ ဗမာတွေဟာဒီလိုပါပဲလားလို့နောက်ထပ် သမိုင်းသစ်မှာထပ်မတွင်ရစ်စေ့ချင်ရင်တော့ ကျေးဇူးတရား
ဆိုတာသိတက်ဖို့ အောင့်မေ့ဖို့ နဲ့ ပြန်လည်ပေးဆပ်တက်ဖို့ လိုအပ်တယ်သိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတင်ပြရင်း
ကရင့်ခေါင်းဆောင်များကို အလေးအမြတ်ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ် ။။ ကရင့်တော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပါစေ။။
Posted by LRDP at 9:34 AM0comments Links to this post
မိုင်းလား ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် လုပ်ကြံခံရသည့်အပေါ် NDFမှအပြင်းအထန်ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်
ဤသို့လူမဆန်စွာ မတရားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ အား ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးဝိုင်းဝန်းချုံ့ ချ သင့်သည် ။။စစ်အုပ်စု
သည် တန်ဖိုးကြီးမား၍ ပြည်သူလူထုချစ်ခင်အားကိုးခံရသောသူများအား အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးနည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်
စနစ်တကျခြေမှုန်းလေ့ရှိသည် ။ဤဖြစ်စဉ်သည် လူတစ်ယောက်သာမာန် အသတ်ခံရ၍ သေဆုံးခြင်းမဟုတ်ပေ ။။
သူ့ အားယုံကြည်အားကိုးသူ သူ့ အားချစ်ခင်လေးစားသူ သူနဲ့ အတူ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးအား ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နေသူအာလုံးကို လုပ်ကြံခြင်းဖြစ်ပေသည်။ စစ်အုပ်စုသည် အများချစ်ခင်လေးစားသူ ခေါင်းဆောင်ကောင်း
ဟူသမျှ ကို ဤသို့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နေခြင်းမှာ ပြည်သူလူထု ထံ အာဏာမအပ်နှံလိုသည်မှာထင်ရှားလှပေသည်။။
ဖရိုမန်းရှာလာဘန်းအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီးစဉ်က ဖထီး၏ ရုပ်အလောင်းကို မိမိ မြင်တွေ့ ခံစားခဲ့ရပြီး ယခုလည်း
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရမှုအပေါ်မမြင်လိုက်ရပေမဲ့တရားခံများအား ပိုမိုနာကျဉ်းမိပါသည်။
သို့ အတွက်ကြောင် အမှန်တကယ် ပြည်သူနှင့် တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးလိုလားသူမှန်သမျှ စစ်အုပ်စု အားနည်းလမ်း
ပေါင်းစုံ နှင့်အမြစ်ဖြတ် ခြေမှုန်း ကြပါစို့--
Posted by LRDP at 7:42 AM0comments Links to this post
လွဲနေတဲ့ တလွဲတွေ နဲ့ အတူ တူနေတာတွေက (တ၀က်မကျိုးသေးတာ)
မိမိ တို့ ဥက္ကဌအား ထိခိုက်စေလိုသောရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ လူငယ်များ၏အတွေးကို ထင်ဟပ်စေလိုသောကြောင့်
ဖြစ်သည် မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ဦးအောင်ရွှေ သည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် ထိပ်တန်းက ပေးဆပ်တိုင်ပွဲ
၀င်သူဖြစ်ကြောင်း ခေါင်းခေါက်ပြီးမှ ရှစ်မခိုးပဲ ၇ှစ်ခိုးပြီး ------- ရေးလိုက်ပါသည်။။။။။။။
ကျမ ဘလော့ ပီပီပြင်ပြင်မရေးဖြစ်တာကြာပေမဲ့ ပြန်လည် ၇ှင်သန်လာတဲ့ ဘလော့ဟောင်းလေးရယ် ညီမလေး
ဒရင်းအိမ်ဂျယ်ဖွင့်ပေးတဲ့ ဘလော့သစ်လေးရယ် နှစ်ခုလုံးက၇ှင်သန်နေတယ် ကျမ ပို့ (စ်)တွေ ရေးပြီး တင်တင်
မတင်တင် အဲဒီ့ဘလော့လေးတွေကရှင်သန်နေတယ်ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး ကျမကိုခင်တဲ့မိတ်
ဆွေ တွေက မကြာမကြာအလည်လာနေဆဲပဲ သတင်းတွေ တင်လည်း အင်းးဆိုပြီးကြည့်ပြီးပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။
အဲ သူတို့ အတွက် ဒီနေ့ကျမ ပြုံးမိတာလေးတွေလက်ဆင့်ကမ်းမယ်လေ - ကျမ က တော်လှန်ရေးအတွက် ဒီ
စာပေ ဒီဘလော့ ကိုရေးဖြစ်တော့ ဒီအကြောင်းလေးတွေ ပဲနွယ် ပါလိမ့်မယ် ဟာသတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။။
သဘောပေါက်သူတွေတော့ ပြုံး ရပါလိမ့်မယ် --ဒီနေ့ကျမနဲ့အတူ ၈၈ တော်လှန်ရေးရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက် ရယ် တိုင်းရင်းသားလူကြီးလူငယ်တွေရယ် ရခိုင်မွန် ကရင်၇ှမ်း ပါတယ်ပေါ့ -စကားဝိုင်းပြောဖြစ်
တယ် ။ကျမ ကတော့ကွန်ပျူတာခုံမှာထိုင်ပြီးပေါ့ --တချို့ မောင်နှမတွေကလည်း ကျမ ကွန်ပျူတာကနေ စကိုက်
ဂျီတော့ နဲ့ နားစွင့်နေ ကြတယ် -- ကျမတို့ မျော်လင့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါဝင်နေတဲ့စကားဝိုင်းလေး
အပေါ်ကိုပေါ့လေ -- သူက ခေတ်အဆက်ဆက် မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဘယ်ခေတ် ဘယ်ခေါင်းဆောင်က ဘယ်
လို လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်တွေပေးခဲ့တယ် ပြောနေတယ် --ကျမ ကလည်း ကျမ ချက်တင်နဲ့ ကျမ ကျမကွန်ပျူ
တာကနေ သူ့ အသံနားထောင်သူလည်းနားထောင်ပေါ့ -- ကျမ နဲ့ ချက်နေတဲ့ ကလေးက အမ အသံဖွင့်ပေးလေ သူ့ သဘောထားတွေ ကျနော်တို့ သိချင်တယ်တဲ့ကျမကနေပါဦးဟ နင့်လို ပဲ တနေရာက ကလေး လေးငါး
ယောက် နားထောင်နေတယ် ။ဆိုတော့ ကျမနဲ့ ချက် နေတဲ့ကောင်လေး ရိုက်လိုက်တာက ကျနော် ၃၀ကျော်ပြီဗျ
ခုထိ အမ က တွေ့ရာလူကလေး ခေါ်နေတုန်း ဆိုပြီး ကောပြော ပြောတော့ ကျမကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ဟုတ်
ပါတယ်မောင်လေးရယ် အမတောင် ၄၀ နီးပြီ မောင်လေးတို့ အသက် က မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ သက်တမ်းနဲ့ ဆို
တ၀က် ကျိုးနေပါပြီလို့ကျမပြောလိုက်တဲ့ အခါ ကောင်လေး က တ၀က်မကျိုးတာ - သန်းရွှေ နဲ့ ဦးအောင်ရွှေ
ပဲ ရှိတယ်တဲ့ လေ--(အသက်ကိုပြောတာနော့) သူ့ ချက်တင်စာလေးနဲ့အတူ နားထဲတစ်သံတည်းဝင်လာတာက
တော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူက ဦးအောင်ရွှေ တို့ က မျိုးဆက်သစ်တွေကို လွှဲပေးသင့်ပြီတဲ့ -
ဟော ခုည ကျတော့ အလုပ်တွေ ရီပို့ ရေးမယ် မေး(လ်)လေးတော့ ဖွင့်ထားမယ်ပေါ့ စာကလည်းရေးချင်တယ်
တွေးလိုက်ရင် ကိုယ်တော်မှိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပြင် ကျေးတောရွာ ကဗျာလေးတွေလည်း စိတ်ထဲဝင်ဝင်
လာသေးရဲ့ အဲ အ၀င်ဆိုးတာကတော့ လီနင် ကိုမပြစ်ပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွေးပဲ ဥက္ကဌ မော်ကို သိတ်မကြိုက်ပေ
မဲ့ ပိန့် ကျင်း ၊ လီလျောက်ချီနဲ့၊ ချူအင်လိုင်း ကိုတော့ ခုထိ (စာဖတ်ခဲ့တာကိုယ်နဲ့ တွေ့ ဖူးသလို) သတိတရ၇ှိနေ
တုန်းပဲ -ဒါပေမဲ့ ကျမလိုချင်တာကတော့ ဒီမိုကရေစီပဲပေါ့ ဒီတော့ စောစောကဖွင့်ထားတဲ့ဂျီတော့မှာ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားဟောင်းကိုယဉ်မင်းဦးနော်ဝေးကနေ ဘာတွေ တွတ်ထိုးထားမလဲ သူ့ မေး(လ်)လေးကို ထောက်
်ကြည့်တော့ စောစောက ကျမရေးရင်ကောင်းမလားတွေးနေတာ နဲ့ခပ်တည့်တည့် တိုးတာကတော့
လိုချင်တာကို တောင်းဆိုတဲ့သူတွေကတော့ အကြမ်းဖက်
တကယ် မော်ဒန် အတွေးအခေါ်တွေပဲ လို့ သူကရေးထား
လေရဲ့ အင်း ကျမလည်း ကိုယ်ကြိုက်နစ်သက်ခဲ့တာတော့ ကွန်မြူနစ် ဘိုးအေ တွေ ခုတကယ်လိုချင်နေတာတော့
ဒီမိုကရေစီ --ဒီမိုကရေစီရှေ့မှာ ဘာမှမပါ (တော်လှန်ရေးတကယ်မလုပ်ခဲ့ပဲ တော်လှန်ရေးစကားပြောသူတွေ ကတော့ ဘုရားစူးမဲ့ ဒီမိုကရေစီမို့သူတို့ ကို ဘုရားစူး ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ကျမပေးထားပါတယ်)မှတ်ချက် ဘုရားစူး
ဒီမိုကရေစီများ၏နာမည်စာရင်းကိုအီးမေး(လ်)ဖြင့် လျို့ ဝှက် လူသိရှင်ကြားတောင်းနိုင်သည်)
နောက်ဆုံး ပြုံးမိတာလေးကတော့ ကျမ ရေးရင်းလက်စဆောင်းပါးတစ်ခု ကို သမိုင်းကြောင်းလေးပါမှာမို့ မှန်
မမှန် ပြန်စစ်နေတုန်း (အိုက်ဆောင်းပါးလေးကဘယ်တော့တင်ဖြစ်မယ် မသိဘူး မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့အမြင်
မတော်မှု လက်နှီးကို ပေညစ်နေမှန်းသိလျှက်နဲ့ သူ့ လက်နဲ့ ဆုတ်နှယ်နေသလို ၊ အပေါင်းကြောင့်ဂုဏ်ပျက်
တာကို သိလျက်နဲ့ မရှောင်ရက်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ငဇင်ကာနဲ့ ပေါင်းမိလို့ဘ၀ပျက်ပြည်ပျက်ရတဲ့
တောင်ငူဘုရင် နတ်ရှင်နောင် နဲ့ ငဇင်ကာဖြစ်စဉ်တနေ့တင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)သေချာမှန်ကန်ဖို့ က ပညာရှင်မေး
လိုက်ဦးမယ်ရယ်လို့ချက်တင် ကနေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖွဲ့ တခု ရဲ့ အတွင်းရေးမှုးဟောင်း အင်မတန်
မှရိုးသားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျူတာတစ်ယောက် ကို ကျမ လှမ်းမေးလိုက် ပါတယ် ။။ သူအားရပါးရ ဖြေလိုက်တာ
တော့ တောင်ငူဘုရင် ဘုရင့်နောင် ပါတဲ့ -ကျမကအချိန်ပြည့်နောက်နေတော့ အမြန်ပြန်ပြင်ပြောပါတယ် ရတု
ဘုရင်နတ်ရှင်နောင် ရယ်လို့အဲဒီတော့ ဒီကနေ့ ပြသနာရှာသမျှပြုံးရတာကြည့်ပဲမို့ လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။။ ။။နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားဟောင်း နောင်တော်နှစ်ဦးအား ချစ်ခင်သည့်စိတ်ဖြင့် နောက်ပြောင်ထဲ့သွင်းရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by LRDP at 9:03 AM2comments Links to this post
အိုင်အယ်အို နှင့်မြန်မာစစ်အုပ်စု နားလည်မှုစာချွန် သက်တမ်း တစ်နှစ် ထပ်တိုး
jrefrmppftpkd;&ESifh tdkift,ftdk qufvufyl;aygif;aqmif&Gufa&; oufwrf;wdk;
aexl; 20 Zefe0g&D 2010 - jrefrmjynfrSm t"rRcdkif;apr_yaysmufa&; qufvufaqmif&Gufzdk@ tkdif t,ftdk(tjynfjynfqkdif&mtvkyform;a&;&mtzGJ@) eJ@ jrefrmppftpkd;&wdk@ em;vnfr_pmc|ef v$m 12 v oufwrf;xyfwkd;vkdufw,fvkd@ tkdift,ftdku xkwfjyefa=unmygw,f? jrefrmjynfudka&muf&SdaewJh tdkift,ftdk tqifhjrifhukd,fpm;vS,ftzGJ@[m uGif;qif; avhvmzkd@twGuf aejynfawmfuae rauG;wkdif; atmifvH+rdK@udk c&D;qufae+yDjzpfygw,f? tdkift,ftdkeJ@ yl;aygif;aqmif&Gufa&; oufwrf;xyfwkd;wmudk ppftpkd;&owif;pm awGrSmvnf; 'Dae@azmfjyygw,f? tvkyform;0ef}uD;Xme0ef}uD; OD;atmif=unfeJ@ tdkift,f tdk tr_aqmif!ïef=um;a&;rSL; um&DwmyD,dkvmwdk@ aejynfawmfrSm wevFmae@rSmawG@qHk +yD; yl;aygif;aqmif&Gufa&;vkyfief;awGudpP aqG;aEG;w,fvdk@vnf; owif;rSmazmfjyygw,f? t"rRvkyftm;ay;ckdif;apr_awGeJ@ ywfouf+yD; jynfolawG&J@ wkdifwef;csufawGudk ppf tpkd;& tm%mykdifawGeJ@ tkdift,ftdk &efukef±Hk;cGJwdk@ yl;aygif;+yD; ta&;,laqmif&Gufzkd@twGuf 'Do abmwlnDcsufudk ppftpkd;&eJ@ tkdift,ftkdwdk@ oabmwlvufrSwfa&;xkd;cJhwmyg? tdkift,ftdkt}uD;tuJeJ@tzGJ@[m jrefrmppftpkd;& tm%mykdifawGeJ@ 'Dae@ wwd, ajrmufae@tjzpf tqifhjrihftpnf;ta0; jyKvkyf&mrSm ta&;}uD;wJhudpP&yfawG aqG;aEG;+yD; wefzdk;&SdwJhtpnf;ta0;jzpfygw,fvdk@ tdkift,ftdk &efukef±Hk; qufoG,fa&;t&m&Sd rpPwm pwdAf rm&S,fu 'DAGDbDudk ajym=um;ygw,f? “tkdift,ftdk tqifhjrifh ukd,fpm; vS,ftzGJ@[m jrefrmppftpdk;&eJ@ qufvufaqG; aEG;zdk@&Sdygw,f? tvGefta&;ygwJh udpPawGtygt0if ta&;}uD;wJh tpnf;ta0;wcsKd@ 'Dae@ usif;yjzpfygw,f? tjyKoabmaqmifwJh qHk;jzwfcsufawGvnf; cscJhygw,f? 'Dvkyfief;pOf[m a&S›quf oGm;aeygw,f? &v'faumif;awG ay:xGufvmzkd@twGuf ESpfzuf qufvuf yl;aygif;aqmif&GufoGm;Ekdifr,fvdk@ ar#mfvifhygw,f?” jrefrmppftpkd;&eJ@ aqG;aEG;cJhwJhtcsufawGeJ@ ywfoufvdk@awmh tao;pdwf xkwfazmf ajym=um;zkd@ tcsdefrwefao;ygbl;vdk@ pwdAfrm&S,fu jiif;qkdygw,f? tkdift,ftdk tqifhjrifhukd,fpm;vS,ftzGJ@[m rauG;wkdif; atmifvH+rdK@e,fu a'ocH awGeJ@ awG@qHkavhvmaqG;aEG;zdk@twGuf c&D;qufaeygw,fvdk@vnf; pwdAfrm&S,fu 'Dae@ rGef;vGJydkif;rSm ajymjyygw,f? “usaemfwkd@[m tck aejynfawmfuae atmifvHudktoGm; vrf;c&D;rSmyg? pDpOf xm;wJhtwkdif; atmifvHudk reufjzefa&mufygr,f? ta&;}uD;wJhtcsufuawmh tpkd;&eJ@ aqG;aEG; oabmwlnDcJhwmawGudk a&S›qufaqmif&GufrSmjzpf+yD; tjyKoabmaqmifwJh tajc cHay:rSm a&S›qufEdkifr,fvdk@ ar#mfvifhygw,f?” tm%mykdifawGu v,fajrodrf;r_eJ@ ywfoufvdk@ tkdift,ftdkudk wkdif=um;cJhwJh atmifvH+rdK@e,fu v,form;awGudk tm%mydkifawGbufu tr_trsKd;rsKd;eJ@ w&m;pGJvdk@ axmif'%fawG uscHae&ygw,f? 'Dv,form;awGtwGuf tusKd;aqmifcJhwJh a&S›ae OD;zdk;jzL udkvnf; rw&m;oif;zGJ@pnf;r_eJ@ w&m;pGJ+yD; axmif'%f4ESpf csrSwfxm;ygw,f? tdkift,f tdktzGJ@ atmifvHutjyefrSm b,fvdk&v'f xGufay:vmr,fqdkwm apmifh=unfh&rSmyg? Ð
Posted by LRDP at 8:49 AM0comments Links to this post
အခုကျွန်လိုခိုင်းခံနေ ရာက နောင်ဆို နွါးလို အခိုင်းခံရမယ်ဆိုတာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်မှကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မစ္စတာ
ကာ၇ီတာပီရိုလာ ဒီတစ်ခေါက်ရောက်ရှိလာပုံကတမူထူးခြားနေပါတယ် ။မြန်မာစစ်အုပ်စုကမည်သို့ 
မည်ပုံ လိမ်လည်လှည့်ပတ်ဦးမယ် မသိပေမဲ့ အိုင်အယ်အို ကိုယ်စားလှယ် ကတော့တကယ်ပဲ မတရား
ထောင်ချအရေးယူခံနေရတဲ့ သူတွေရဲ့မိသားစုတွေ မြန်မာ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးလယ်သမားအခွင့်
အရေးတွေအတွက်ရပ်တည်သူတွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်အယ်အို နဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စု နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွေ နှစ်စဉ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတိုင်းရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့
အဲ ဒီ့ထဲက အဓမ္မလုပ်အားစေခိုင်းမှုတွေ ပပျောက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ် ။။
အဓမ္မစေခိုင်းမှုတွေ ကို ရန်ကုန်အိုင်အယ်အိုရုံးကို တိုင်ကြားတဲ့အခါ မဖမ်းဆီးဘူး (ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးမယ်) ဆိုတဲ့ အချက်ကို အဓိက လက်မှတ်ရေးထိုးပေမဲ့စစ်အုပ်စုဟာ လက်မှတ်သာထိုးတာ၇ှိပြီးပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးပဲ
လယ်သမားတွေ ကိုဖမ်းဆီးခြင်း နဲ့ အတူ ရန်ကုန်အိုင်အယ်အိုရုံးနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေ ကို
နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ခြိမ်းခြောက် နေဆဲပါ ။။ ဒါကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ 
သိရှိနေတာကြောင့် ခုလို လာရောက်ဖြေရှင်း ပြီးကူညီဖို့ ကြိုးစားတာလို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။။
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၆ မေဒေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အလုပ်သမား တွေ ကိုယ့်အခွင့်အရေးဘာလဲ
ဆိုတာသိရအောင် ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ ပညာပေးမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မြို့ နယ်ခေါင်း
ဆောင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဥပဒေကျောင်းတက်နေတဲ့ သူရိန်အောင် နဲ့ ရှေ့နေ ကျော်ကျော် တို့ ဦးဆောင်တဲ့
အမေရိကန်စင်တာမှာပြုလုပ်မဲ့ မေဒေးပွဲကိုစစ်အုပ်စုက အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခံခဲ့ရပါတယ်။။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်ကြီးကပြင်းထန်စွာချုံ့ ချ ပြီး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေပေမဲ့
ကိုယ်လက်အဂါင်္အားနည်းနေသူတစ်ယောက်က လွှဲ ရင် ကျန် (၅)ယောက် ကို မိသားစုနဲ့ ဝေးတဲ့ဝေးလံတဲ့
ထောင်တွေဆီပို့ ထားပါတယ်။မစ္စတာကာရီတာပီရိုလာကိုယ်တိုင်၎င်းတို့ မိသားစုနဲ့ တွေ့ ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ် ။
စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံစံတွေ့ ဆုံပေးမယ် မသိပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက် အိုင်အယ်အို အထူးကိုယ်စား
လှယ်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု ကတော့ အလုပ်သမားတွေ အပေါ် ပိုမိုအားတက်စေပြီး အဓမ္မစေခိုင်းမှုတွေ လျော့ပါး
ပျောက်ပျက်စေဖို့ ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချထားသူတွေ ကို အမြန်ဆုံး
လွတ်နိုင်စေဖို့ အကျိုးရလဒ်တွေ ၇ှိလာမယ် လို့ မျော်လင့်ရပါတယ်။။
ဒါပေမဲ့ စစ်အုပ်စုအဓမ္မရေးဆွဲ အဓမ္မအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်စေမှု
ကို ပိုမို ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်အဖြစ် (အားပေးအားမြောက်ဖြစ်စေတဲ့) ရေးဆွဲထားတယ် ဆ်ို တာမြန်မာ
အလုပ်သမားထုအားလုံးသတိချပ် ဖို့ လိုပါတယ်။။
အကယ်၍သာ ဒီ အခြေခံဥပဒေ အတည်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် အလုပ်သမားထုတစ်ရပ်လုံး အခုကျွန်လိုခိုင်းခံနေ
ရာက နောင်ဆို နွါးလို အခိုင်းခံရမယ်ဆိုတာ သေချာနေတာမို့ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် အိုင်အယ်အို
နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ မြန်မာအလုပ်သမားထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်
ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်( ILO) ၇ှိနေတယ်ဆို ခုရောက်ရှိနေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ရပ်တည်မှုကိုကြည့်
ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။။
Posted by LRDP at 3:28 AM0comments Links to this post
ကျနော်တို့ရဲ့အနေအထားတွေဟာ ပိုပြီးတော့ တင်းမာတဲ့ အနေအထားမျိုး သို့မဟုတ်လည်း ပိုပြီးတော့ ပြတ်သားတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ရောက်လာမယ်
ပါတီတခုလုံးကို ထောင်ကျတဲ့ အနေအထားမျိုး ရောက်လာမယ်ဆိုရင်
ကျနော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ပြင်းထန်တင်းမာလာမယ်
အမြင့်ဆုံးပုံသဏ္ဌာန်ဆိုတာက အာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပေါ့။ အနိမ့်ဆုံး ပုံသဏ္ဌာန်ဆိုတာကလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေ သဘောတူညီချက်ရရင် အဲဒါတွေကို အခြေခံပြီးတော့ လွှတ်တော်ခေါ်လိုက်။ တနေ့တည်းပဲခေါ်ခေါ် ဒီလွှတ်တော်ကနေ သဘောတူညီချက်များကို အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ပြီးရင် ဒီလွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲ အသစ် လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ အဲလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါက ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ပါ။ တနည်းနည်းနဲ့ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စကားဟာ အနိမ့်ဆုံးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒီလိုတနည်းနည်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကတော့ လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခုကို နောက်ရွေးကောက်ပွဲတခုနဲ့ နင်းကြိတ်ချေသလိုလုပ်ရင်တော့ ဒါတွေဟာ သမိုင်းမှာလည်း မလှမပဖြစ်မယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး အငြင်းပွားစရာတွေကလည်း ရှိမယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ ဆုပ်ကိုင်ပြီးထားပြီးတော့ နောက်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းတဲ့ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးလုပ်ရင်လည်း ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဟာ ရှင်းစရာ ပြေလည်စရာ ဘာမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်က ယူဆပါတယ်
Posted by LRDP at 7:26 AM0comments Links to this post
ဘလော့ မိတ်ဆွေများအား လုံးနဲ့ကျမ ဘလော့မှာလင့် ထားတဲ့ ရဲဘော် မိတ်ဆွေများ
အားမေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။။ လင့်အသစ်ချိတ်ရင်း ချိတ်ထားပြီးလင့်များ အားလုံးပျောက်
သွားတဲ့အတွက် လင့်များကို ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်လည်ပေးစေလိုပါတယ် .. အီးမေး(လ်)ဒါမှ
မဟုတ် ကွန်မန့် ကနေ မိတ်ဆွေများရဲ့လင့်များပြန်လည်ပေးပို့ ကြပါရန်
Posted by LRDP at 1:15 AM2comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သဖြင့်ဤကဲ့သို့ သောစနစ်ဆိုးကို မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်
(၆၂) နစ်မြောက်လွှတ်လပ်ရေးနေ့ တွင် ပြောကြားသော သခင်သိန်းဖေ ၏ မိန့် ခွန့် 
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကြေညာချက်
ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီးသည် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ အမွေအနှစ်မဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ ပုဂ္ဂလိကအပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်သင်းက ချုပ်ကိုင်အနိုင်သိမ်းယူ အကျိုးခံစားအပ်သော နိုင်ငံမဟုတ်၊ (လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းမှ)
Posted by LRDP at 5:40 PM 1 comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:37 AM 1 comments Links to this post
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပန်းချီ ပြပွဲ ရှိတယ် ။ ၀ါသနာရှင်
တွေ မနက်ဖန် ၂-၁-၂၀၁၀ ကစ ၈-၁-၂၀၁၀ အထိသွားရောက်
ကြည့်ရှု အားပေး နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေး နိုင်ငံအရေး
ဘာသာရေး စတဲ့အရေးပါတဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ
ပန်းချီဆိုတဲ့အနုပညာ ဖန်တီးစွမ်းအားဟာလည်း လက်နက်
ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ခု လူကြီး လူငယ် လူလတ် တွေ
ရဲ့ ပန်ချီပညာစွမ်းအားတွေကို အားပေးရအောင်လို့ အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် သို့ချီတက်ကြရအောင်လို့ 